ओली–मोदीवीच चार बुँदे सहमति भएको खुलासा ! – पुरा पढ्नुहोस्……
ओली–मोदीवीच चार बुँदे सहमति भएको खुलासा !
काठमाडौं। भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजको नेपाल भ्रमणपछि नेपाल–भारत द्धिपक्षीय सम्बन्धमा नयाँ थपिएको हल्ला सुनिएको छ । स्वराजको नेपाल भ्रमणसँगै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीवीच चार वटा विषयमा सहमति भएको समेत खुलासा भएको छ ।
उच्च स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार मोदी र ओलीले नयाँ बदलिँदो परिवेशलाई आत्मासात् गर्दै द्धिपक्षीय सम्बन्धलाई आपसी हित अनुकुल अघि बढाउने संकल्प गरेका छन् । नेपालमा तीनै तहका निर्वाचन सम्पन्न भएपछि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालका तीन वटै ठूला दलका नेतालाई फोन गरेर व्यक्तिगत रुपमै बधाई दिएका थिए । यसमा पनि उनले खास महत्व भने एमाले अध्यक्ष ओलीलाई नै दिएका थिए ।
उनले एक महिनाको अवधिमा दोहोर्याएर ओलीसँग कुरा गरेका थिए । उनले कुराकानीको दौरानमा ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रुपमा चित्रण गर्दै भारत भ्रमणको निम्तो समेत दिएका थिए । त्यसको केही दिनपछि नै भारतले नेपालमा विदेशमन्त्री स्वराजलाई नेपाल पठाउने खबर सार्वजनिक गरेको थियो । र, स्वराजले हालै नेपालको भ्रमण गरिसकेकी छिन् । उनको दुई दिने नेपाल भ्रमण एमाले अध्यक्ष ओलीकै निम्तोमा भएको हो पनि भनिएको छ ।
ओली–मोदीवीच चार बुँदे सहमति :
ओली र मोदीवीच भएका महत्वपूर्ण चार सहमति अनुसार पहिलो रहेको छ । ओलीको निमन्त्रणमा मोदी नेपाल भ्रमणमा आउने पक्का भएको छ । उनको नेपालका मुक्तिनाथ र जनकपुरको जानकी मन्दिर घुम्ने अधुरो चाहना ओलीले नै पूरा गराउने भएका हुन् । जुन कुरा ओलीले मोदीसँगको टेलिफोनवार्तामा समेत भनिसकेका छन् । रमाईलो त के भने, मोदीले पनि ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्नुपुर्व नै भारत भ्रमणको निम्तो दिए । र, ओलीलाई स्वागत गर्न आफूहरु आँतुर रहेको मोदीको वचन थियो । पहिलो सहमतिमा दुवै नेताले एक अर्काको देशको भ्रमण गर्ने रहेको छ । उनीहरुको समझदारी भनेको नै द्धिपक्षीय उच्चस्तरीय भ्रमणलाई निरन्तरता दिने ।
दोस्रो समझदारीमा भने आर्थिक साझेदारी रहेको छ । मोदीले पनि नेपालमा स्थायित्व र विकास होस भनेर धेरैपटकको सार्वजनिक भाषणमा आफ्नो अभिव्यक्ति दिईसकेका छन् । सोही अनुसार उनले नेपालमा निर्वाचन सम्पन्न भएकोले आर्थिक समृद्धिको लागि सहकार्यमा जोड दिएका छन् । यता ओलीले पनि मोदीको उक्त चाहनामा आफू पूर्ण रुपमा सहमत भएको जनाईसकेका छन् ।
तेस्रो सहमतिमा भने द्धिपक्षीय सम्बन्धमा देखिने र आगामी दिनमा आउने भवितव्य खालका अविश्वासका खाडलहरुलाई आपसी समझदारीका आधारमा हल गर्ने रहेको छ । विगतमा देखिएका अविश्वासलाई अब विश्वासमा परिणत गर्नुपर्नेमा उनीहरु दुवै एकमत देखिएका छन् ।
त्यस्तै उनले सिमा नाकामा देखिने सबै खाले समस्याहरुपनि कुटनैतिक टेबलमार्फत हल गर्नुपर्ने आपसी समझदारी बनाएका छन् । नेपाल–भारत प्रवुद्ध समूहले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार नै अघि बढ्ने पनि उनीहरुवीच समझदारी बनेको छ।
त्यस्तै चौथोमा आर्थिक समृद्धि र विकासको लागि भारतसँगको सहकार्यलाई अझै तिव्रता दिने पनि ओली–मोदीवीच समझदारी बनेको छ। दुई तिहाईभन्दा बढिको व्यापारिक हिस्सा भारतसँग भएकोले आगामी दिनमा पनि भारतसँग दिर्घकालिन रुपमा सहकार्य गर्ने ओलीको चाहना छ ।
Prev८ वर्षअघि कुवेत पुगेकी सुष्माले साथमा छोरो लिएर आएपछि…….
Nextयुरोप पठाइदिने भन्दै ठग्ने कन्सल्टेन्सीका सञ्चालकसहित ५ जना पक्राउ , पुरा विवरण हेर्नुहोस
बिहेको दिनकै भोलीपल्ट कृष्णको २ हात र १ खुट्टा काटियो ! रुपालाई आफन्तले अर्कैसँग बिहे गरेर जा भन्छन्-रूवाउने हेर्नुहोस (भिडियो सहित)
पत्नि आँचललाई हेलिʼकप्टरमा लिएर उडे उदिप श्रेष्ठ, हेर्नुʼहोस् भिʼडियो सहित
रबि ओडकी आमा बितेपछि अस्मिता अधिकारीले रुदै यस्तो भनिन् ! जस्ले सबैलाई रुवायो-हेर्नुहोस (भिडियो सहित)
पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीले जाँदा जाँदै नेपालीहरुका लागी दिए एउटा महत्वपूर्ण वचन, जसले नेपाली बिद्यार्थीहरुलाई हुनेछ ठूलो फाइदा।
आजको राशिफलः बि.स.२०७७ साल कार्तिक १५ गते शनिबार इश्वी सन २०२० अक्टोबर ३१ तारीख
मुन्द्रेको कमेडी क्लबमा धमला दम्पतीको हमला,हेरौं रमाइलो प्रोमो भिडियो
खेम सेन्चुरी र मधु क्षेत्रीको बिबा, दको बिषयमा बोले गायक प्रकाश पराजुली (भिडियो सहित)
चर्चित मोडल अन्जली अधिकारी र चक्रको अभिनयमा “चोली ढाकाले” सार्वजनिक (भिडियो सहित)
१ लाख नाघेको सुनको मुल्य ओरालो लाग्दै, यस्तो छ आज तोलाको।
आज ह्वात्तै बढ्यो अमेरिकी डलर सहित यी बिदेशी मुद्राको भाउ, कुन देशको कति?